जिल्ला लिग फुटबलमा नवदुर्गा र बुद्ध विजयी – Sadarline
2021 Jun 24, Thursday ।। १० असार २०७८, बिहीबार
नेपालगन्जदेखि जुम्लाका लागि सुविधयुक्त टाटासुमो सञ्चालनमा
गाउँमै नागरिकता र चिकित्सा सेवा
पर्यटन मन्त्रीको पहिलो निर्णय, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थललाई तीब्रता दिईने
मुटुका लागि मदिरा राम्रो कि नराम्रो ?
राप्तीसोनारीमा आपतकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना
शिक्षा नीति निर्माणका लागि मस्यौदा समिति गठन
प्रतिबन्धित जडीबुटी सशस्त्र प्रहरीद्वारा बरामद
खजुरामा भलिबल प्रतियोगिता शुरु
युवा संघ नेता क्षेत्रीको खजुरामा हत्या प्रयास
केविड–१९ राहत कोष बाँकेद्वारा राहत बितरण सुरु
जिल्ला लिग फुटबलमा नवदुर्गा र बुद्ध विजयी
२५ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:१६
नेपालगञ्ज : बाँकेमा जिल्ला लिग फुटबल प्रतियोगिता शुरु भएको छ । बाँके जिल्ला फुटबल संघको आयोजनामा शनिवारदेखि जिल्ला लिग फुटबल शुरु भएको हो ।
प्रतियोगिताको पहिलो दिन भएको दुई वटा खेलमा नवदुर्गा युवा क्लव कम्दी र बुद्ध युवा क्लव मुक्तिपुर विजयी भएका छन् । नवदुर्गा युवा क्लवले युनाइटेड क्लव नेपालगञ्जलाई ५–० गोलले पराजित गर्यो । अर्को खेलमा बुद्ध युवा क्लवले जयकिसन क्लव सैनिकलाई २–० गोलले पराजित गरेको छ ।
प्रहरी तालिम केन्द्रका गणपति प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक डा. देवबहादुर बोहराले रेफ्री अमर घलेलाई बल हस्तान्त्रण गरेर प्रतियोगिताको उद्घाटन गरेका थिए । जिल्लामा यसपाली ११ वटा टीमले जिल्ला लिगमा भाग लिएको छ । बाँके जिल्ला फुटबल संघका अध्यक्ष भोजराज शाहीका अनुसार गतवर्ष १४ वटा क्लवले जिल्ला लिग खेलेका थिए ।
जिल्ला लिगको विजेताले प्रदेशमा सहभागिता जनाउन पाउँछन् । प्रदेश च्याम्पियनले केन्द्रमा खेल्न पाउने प्रशिक्षक रविन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
अपर कर्णालीमा बम विस्फोट
सदरलाइनडटकम, अछाम : अछामस्थित अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको कार्यालयमा बम विस्फोट भएको छ । अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका ३ भैरवस्थानमा रहेको सम्पर्क कार्यालयमा शनिवार बिहान ४ बजे प्रेशर कुकर बम विस्फोट भएको प्रहरिले बताएको छ । स्थानीय दीपक बिसीबाट भाडा लिएर उक्त आयोजनाले कार्यालय सञ्चालन गरिरहेको घरमा बम विस्फोट भएको हो […]
१० जेष्ठ २०७६, शुक्रबार १७:४७
निर्मलाको हत्यारा पत्ता लगाउन दबाव
१० कार्तिक २०७५, शनिबार १८:२५
रेड पाण्डाको छालासहित शाही पक्राउ
४ फाल्गुन २०७४, शुक्रबार ०८:००
४ जेष्ठ २०७६, शनिबार १५:३२
‘पब्जी’ खेल्ने महिलाले मागिन् सम्बन्ध विच्छेद
२८ आश्विन २०७३, शुक्रबार ०८:३३
मंसिरमा नेपालगन्ज–मनिकापुर शैक्षिक एवं धार्मिक महोत्सव हुने
खजुरा गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम पारित
फौजी किराबाट सजग रहन कृषकलाई आग्रह
पहिरोले घर पुर्दा रोल्पामा तीनजनाको मृत्यु, तीन घाइते
बर्दियामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै
टियुको स्थगित परीक्षा साउनबाट, परीक्षा फाराम अनलाइनबाट